"Wadannimo- Xornimo - Farxad"
- Madaxweyne Nguyễn Minh Triết
- Ra'iisul wasaare Nguyễn Tấn Dũng
- Taariikhda 2 Sebteembar, 1945
- Total 331,690 km2 km²
- 2016 qiyaas 92,700,000 2
Fiyetnam (Vietnam) waa dawlad kutaala koonfurta bari ee qaarada Asiya. Wadankaan waxoo xuduud la leeyhay wadamada Shiinaha, Laos iyo Kambodiya.magaalo madaxda wadanka waa Hanoi. Wadankaan waxaa degan dad ka badan 85miliyan oo qof, waa wadanka 13aad oo ugu dadka tirada badan aduunka.Waddanka: / ˌvjɛtnæm, -nɑːm /, US: / ˌviːətnɑːm, -næm / (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa);  Vietnamese: Việt Nam ayaa loo yaqaan [vîət nāːm] (ku saabsan codkan maqal)), ee Vietnam (Vietnam: Công hòi Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), waa wadamada bariga ee ku yaal jasiiradda Indochina. Iyadoo lagu qiyaasay 94.6 milyan oo qof ilaa sanadka 2016, waa dalka 15-aad ee adduunka, iyo wadanka 9-aad ee ugu badan Asia. Wadanka Vietnam waxaa xuduud u leh Shiinaha waqooyiga, Laos, ilaa waqooyi-galbeed, Kambodiya, koonfur galbeed, Thailand oo ku taal Gacanka Thailand ee koonfur galbeed, iyo Filibiin, Malaysia iyo Indonesia oo ku yaalla Badweynta Koonfurta Shiinaha xagga bari iyo koonfur. Magaalada caasimadda ah waxay ahayd Hanoi tan iyo markii la isku keeney Waqooyiga iyo Koonfurta Sannadkii 1976-kii, iyada oo Ho Chi Minh City u ahayd magaalada ugu badan.
Qaybta waqooyiga ee Vietnam waxay qayb ka ahayd Imperial China muddo ka badan sanad, laga bilaabo 111 BC ilaa AD 939. Dowlad madaxbannaan oo madaxbannaan oo Vietnam ah ayaa la sameeyay 939, kadib guushii Vietnam ee Battle of Bạch River. Hantidhowrka Horumarinta ee Vietnam wuxuu kor u kacay sidii waddanku u ballaariyay juquraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba Koonfurta Aasiya, illaa jasiiradda Indochina lagu soo afjaray Faransiis qarnigii 19-aad.
Ka dib markii la qabsaday Jarmalka 1940-kii, Vietnamese-ka waxay ku dagaalameen xukunka Faransiiska ee Dagaalka Indochina. 2dii Sebtembar 1945 Madaxweynaha Hoog Chí Minh ayaa ku dhawaaqay xornimada Vietnam ee ka timid Faransiiska oo ku hoos qoran magaca cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Vietnam. Sanadkii 1954, Vietnam waxay ku dhawaaqday guushii Battle of Dien Bien Phu, oo dhacday intii u dhaxaysay Maarso iyo May 1954 waxayna ku dhufatay guuldaradii weynaa ee Faransiiska. Intaas ka dib, Vietnam waxa loo kala qaybiyay laba dawladood oo ku tartamaya, Waqooyiga Vietnam (rasmi ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Vietnam) iyo Koonfurta Vietnam (si rasmi ah Jamhuuriyadda Vietnam). Khilaafka udhaxeeya labada dhinac ayaa waxa uu ku sii xoogeysanayaa waxa loo yaqaano Dagaalkii Vietnam, iyada oo fara-galin culus oo Maraykanku ka soo galo dhinaca Koonfuurta Vietnam tan iyo 1965-kii illaa 1973-dii. Dagaalku wuxuu ku dhamaaday guushii North Vietnam ee 1975.
Wadanka Vietnam ayaa markaa la isku raacay dawlad ka tirsan xisbiyada, laakiin waxay ahayd mid liitay oo siyaasad ahaan loo go'doomiyay. 1986-kii, Xisbiga Tigreega ee Vietnam wuxuu bilaabay dib-u-habayn dhaqaale iyo siyaasadeed oo bilaabay waddada Vietnam si uu u dhexgalo dhaqaalaha aduunka.  Sannadkii 2000, waxay xiriirkii diblomaasiyadeed la laheyd dhammaan waddamada. Tan iyo sanadkii 2000, heerka horumarka dhaqaalaha ee Vietnam wuxuu ka mid ahaa kuwa adduunka ugu sareeya,  iyo, sannadkii 2011, waxa uu ku jirey Heerka Kobcinta Caalamiga ah ee Korantada ee 11ka Dhaqaale ee waaweyn. Dibuhabaynta dhaqaale ee guulaystay waxay keentay in uu ku biiro Ururka Caalamiga ah ee Ganacsiga sannadkii 2007. Vietnam ayaa xubin ka ah Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha ee Aasiyada Koonfur-Galbeed, Iskaashiga Dhaqaalaha Asia iyo Iskaashiga Caalamiga ah iyo Ururka Caalamiga ah ee de la Francophonie
Fiyetnam waxee ka mid aheed dhul markiisa hore laisku dhihi jiray Farasiiska indoshiina, waxaana gumeesan jiray gumeestihii faransiiska taariikhda marka ee eheed 1800. Gumeesigaan waxaa qabsaday Dawladda Jabaan waqtigii oo socday Dagaalkii Labaad ee Aduunka. Dhamaadkii dagaaladii aduunka wadanka waxaa ka dhashtay dowlad cusub oo komunist ah, waxaana hogaaminaayay nin lagu magacaabo Ho Chi Minh oo markiisa hore ka mid ahaan jiray Jabhad la dhoho Viet Minh oo u dagaalami jirtay xoreenta fiyetnam. Dagaal ayaa u dhaxeeyay ciidamada faransiiska iyo jabhada Viet Minh taariikhda marka ee eheed 1946dii ilaa 1954tii, dagaalkaas waxaa la dhihi jiray Dagaalkii Indoshiina. Dagaalkaas waxoo dhamaaday markii ciidamadii faransiiska lagu jabshay magaalada Dien Bien Phu.Waqtigaas ka dib, mareykanka ayaa soo galay wadanka si oo u joojiyo xukunka komunistiga ah oo ka jira dalka fiyetnam. Taariikhda marka ee eheed 1959 ilaa 1975tii waxaa socday Dagaalkii Fiyetnam, oo u dhaxeeyay waqooyiga fiyetnam iyo Koonfurta fiyetnam, dagaalkaas neh waxoo ku dhamaaday Komunistiga woqooyiga fiyetnam oo ku guuleesatay dagaalka, isla markaas neh ee wadanka mideeyeen. Taariikhda marka ee eheed 1976dii marka ee fiyetnam u dirtay ciidamo wadanka ee dariska yihiin ee Kambodiya, waxaa weerar ku soo qaaday wadanka Shiinaha, dagaalkaas neh waxoo ku dhamaaday sixida xuduudka shiinaha iyo fiyetnam. ciidamada fiyetnaamiiska aad ayee uuga adkaayeen kuwa shiinaha.
Bahasa Banjar: Vietnam
Basa Jawa: Viètnam
Baso Minangkabau: Vietnam
Basa Sunda: Viétnam